Forex Trading သည်ဟာလာဟုတ်လျှင်သိရန်မည်သို့လေ့လာရမည် - Learn2Trade May 2022
Forex Trading သည်ဟလာလ် ၂၀၂၁ ဖြစ်ပါကမည်သို့သိရမည်နည်း
Forex trading နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်များမေးလေ့ရှိသည့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ Forex trading သည် halal ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ အကယ်၍ သင်ဟာအလားတူအရာတစ်ခုကိုတွေးမိနေရင်၊ ညာဘက်စာမျက်နှာကိုရောက်သွားပြီ။
အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်မှုသည်ဟားမားဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူဆထားကြသော်လည်းသင်၏ယုံကြည်မှုအပေါ် မူတည်၍ သင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိနေသေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟလာလ်ကိုတားမြစ်ထားသော်လည်းဟလာလ်သည်အစ္စလာမ်သာသနာကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်မေးခွန်းမှာ - Forex trading သည်ဟလာလ်လား။
သင်တို့အတွက်ကောင်းသောသတင်းမှာ halal forex trading account များဖြစ်သည် do တည်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအတိုးသို့မဟုတ်လဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေမပေးချေ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Forex trading ကိုဟလာလ်ဟုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အစ္စလာမ့် Forex Trading အကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။
ကုရ်အာန်ကိုသစ္စာရှိသူများနှင့်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးအခြေခံမူများကိုလိုက်နာလိုသူများသည်အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း Forex trading halal account များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုများသောအားဖြင့်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မရှိသောအကောင့်သို့မဟုတ် halal forex trading account ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
အစ္စလာမ်အကောင့်များအတိုးမပေးပါဘူး အကြောင်းမှာရှရီယာဥပဒေ (အစ္စလာမ့်ဥပဒေ) သည်အစ္စလာမ်သာသနာကိုတားမြစ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဝင်ငွေ လှူဒါန်းမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ ပေးဆောင်ခြင်း အကျိုးစီးပွား။
အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးအတွင်းရှိမည်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမဆိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာထူးချွန်သောငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုပမာဏတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ချက်ချင်းပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတွင်ငွေပေးငွေယူစရိတ်များပါ ၀ င်သည်။
ဟလာလ် Forex အရောင်းအဝယ်သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်သော်ငြားလည်းအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုဖောက်သည်များလဲလှယ်ခြင်းမရှိသောပွဲစားများမများပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီလမ်းညွှန်ရဲ့အဆုံးမှာဖုံးထားတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရှိစျေးကွက်မှာတက်ကြွနေတဲ့အကောင်းဆုံးဟလာလ် Forex အရောင်းအဝယ်ပွဲစားများကိုလက်ရွေးထားပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အစ္စလာမ့် Forex အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်များကို ကြီးကြီးမားမား ကြော်ငြာထားခြင်း မရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤကုန်သွယ်အကောင့်အမျိုးအစားကို တောင်းဆိုသည့် ဖောက်သည်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့သည် forex ကုန်သွယ်မှုပွဲစားအတွက် ငွေကြေးအရ အကျိုးနည်းနိုင်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
Forex Trading ဟာလာ၏အခြေခံများ
ဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်သမားရိုးကျ forex trading account များနှင့်တူညီမှုများစွာရှိသည်။ သို့သော်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်အထူးသဖြင့်အသွင်သဏ္featuresာန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ပြေစာ သို့မဟုတ် အတိုးတစ်ခုခုပေးချေခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း (riba – ဤစာမျက်နှာအောက်၌ နောက်ထပ်)။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ လဲလှယ်ပေးခြင်း။
မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းမှမဆိုဘာသာရေးဆိုင်ရာမူကိုထိန်းသိမ်းလိုသောဖောက်သည်များအတွက် Forex trading halal account သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Forex trading ၏အခြေခံသဘောသဘာဝကိုဟလာလ်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်၎င်းသည်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်မဆန့်ကျင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
Forex အရောင်းအဝယ် - Haram သို့မဟုတ် Halal?
Forex နဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ ကုန်စည်, စတော့ရှယ်ယာအနာဂတ်နှင့် အခြားနာမည်ကြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများ၊ အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်ရှိသူများသည် ကုန်သွယ်မှုသည် ဟာရမ် သို့မဟုတ် ဟလာလ်လားဟု မကြာခဏ တွေးမိကြသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အဓိကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အွန်လိုင်းကုန်သွယ်နှင့်ကမ္ဘာ့လေးပုံတစ်ပုံသည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည်အစ္စလာမ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်၏အကြောင်းအရာများသည် ပို၍ များပြားလာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 'Forex Trading သည်ဟာလာဟုတ်လျှင်မည်သို့သိရမည်နည်း' ၏ဤအပိုင်းသည်ဤဘာသာရပ်အပေါ်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပါမည်။ မျှော်လင့်ပြီးအရေးကြီးသောမေးခွန်းကိုဖြေခြင်း - 'Forex trading သည်ဟာလာလားဟရမ်လား?' Forex စျေးကွက်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်း၏လုပ်ရပ်များ၊ ရှရီယာဥပဒေကိုလိုက်နာနေစဉ်မည်သည့်ဘဏ္theာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသင့်အားကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသင့်သည်နှင့်သင်မည်သို့အားဖြင့်ဟလာလ် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ပုံကိုအကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Forex trading သည်နေ့စဉ်ကုန်သည်များပိုမိုများပြားလာသောကုန်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက် များမှာ ၄ င်းတို့၏ဘဏ္financeာရေးအခြေအနေ (နှင့်အခြားနည်းများ) ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ခြင်း၊
အမှန်မှာ၊ Forex trading သည်အဓိကအားဖြင့်ငွေကြေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဟလာလ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်သော်လည်းအစပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ယူအခြားအရာအချို့၏သင်တန်းရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျဒေါ်လာနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ကျမှရောင်းမည်ဆိုပါကဤဥပမာတွင်မီးခိုးရောင်areaရိယာ၏ဥပမာတစ်ခုမှာဤအရာသည်အလွန်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Forex Riba - အစ္စလာမ့်ဘဏ္Financeာရေး
ဟုတ်ပါတယ်၊ အာရဗီဘာသာဖြင့်ရီဘာဆိုတာ 'တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုလျှံခြင်း' လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ထို့ကြောင့်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက်တစ် ဦး အတွက်ရီဘီကိုတားမြစ်သည်ဟုကျယ်ပြန့်စွာယူဆကြသော်လည်း၊ အမှန်တကယ်ရိုင်ဘာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများများစွာရှိသည်။
Forex trading ဈေးကွက်တွင်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ session ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ရာထူးအချို့ကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်မှာပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Forex ပွဲစားသည် 'swap ကော်မရှင်' အဖြစ်လူသိများသောအရာကိုအားသွင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အတိုးနှုန်းနှင့် (ညချင်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှု) နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ forex ပွဲစားသည်သင့်အား (သြဇာအားဖြင့်) သွယ်ဝိုက်သောချေးငွေကိုပေးအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ချေးငွေနှင့်မဆိုကဲ့သို့ပွဲစား (ဤကိစ္စတွင်ကြွေးရှင်) သည်အမြတ်အစွန်းရရှိလိမ့်မည်။ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သမားရိုးကျ Forex trading account ကို haram အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာစစ်ဆင်ရေးတွင်အတိုးနှုန်းများ (overnight finanzjament) ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ Forex ကုန်သွယ်ဟလာလ်လား မဟုတ်ပါ၊ အတိုးပေးငွေများကိုညီမျှခြင်းသို့ချက်ချင်းရောက်သည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, စံ Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ဟလာလ်စဉ်းစားတော့ဘူး။
အကြောင်းမှာအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုရှိသူများအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတိုးမဲ့ချေးငွေကိုထုတ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ချေးငွေကအကြွေးကိုအတိုးမဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာပဲ ဟလာလ် Forex အရောင်းအဝယ်သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မဟုတ်သောကြောင့် Forex ပွဲစားသည် ၀ ယ်ယူသူအား ၀ င်ငွေကိုကော်မရှင်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများ (အမြတ်အစွန်းရရန်) အတွက်အားသွင်းခိုင်းနိုင်သည်။
ဤအရာသည်အခကြေးငွေဖုံးကွယ်အကျိုးစီးပွားထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်နေရာဖြစ်သည်။ သူကပြောကြားခဲ့ပြီး Forex trading ၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သုတေသီများသည်ဤနည်းလမ်းကိုထောက်ခံကြသည်။
လက် -In- လက် Forex ကုန်သွယ်ဟလာလ်
ယခုလက်ရှိအမှန်တကယ်လဲလှယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည် 'လက်ချင်းချိတ်' ပြုပါက Forex trading သည်ဟလာလ်လား။ အခြေခံအားဖြင့် - ဟုတ်တယ်၊ အစ္စလာမ်ကကုန်သွယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုတယ်၊ “ လက်ချင်းတွဲ” ငွေပေးငွေယူသည် Forex ပွဲစားနှင့်ကုန်သည်တစ် ဦး အကြားသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ဤအရောင်းအ ၀ ယ်သည်များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ပြီးကုန်သွယ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အချို့လူများကဤအစီအစဉ်သည်ကုန်သည်နှင့်ပွဲစားများအကြားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါတီနှစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဟလာလ်ကိုဟန့်တားခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် စာချုပ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်ငွေပေးငွေယူကိစ္စများဖြစ်သင့်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ Forex ကုန်သည်များသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံလျော့နည်းစေသည်။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ ထို binary options များ Forex trading အတွက်၊ ဒါကငွေရှာဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သို့သော်ဒွိစုံရွေးချယ်စရာများတွင်ကုန်သည်များကငွေကြေး pair တမျိုး၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု (ကုန်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုအပြောင်းအလဲ) ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ဤကဲ့သို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဤကုန်သွယ်မှုသည်ဟားမားဖြစ်သည်။
Forex Trading သည်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့် Haram လား။
လောင်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့်ဟားမာဟုသတ်မှတ်ခြင်းများဖြင့်အစ္စလာမ်တွင်လောင်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, Forex ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂိမ်းမစဉ်းစားလျှင် Forex ကုန်သွယ်ဟလာလ်လား?
အဓိကအားဖြင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည့်ကုန်သွယ်ရေးတွင် Forex trading ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်းမှတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သည်တစ် ဦး ၏တာ ၀ န်မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဈေးနှုန်းအတက်အကျကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့် Forex trading market ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်မဟာဗျူဟာနှင့်သဘောတရားများကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကုန်သည်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်အခြေခံသည်။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အကောင့်အားလုံးမှဟားမားမဟုတ်ပါ။
အစ္စလာမ့်ဘဏ္Financeာရေးအန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ် - Forex Trading ဟလာလ်
Bai bithaman ajil (ရွှေ့ဆိုင်းငွေပေးချေမှုဖြင့် ရောင်းချခြင်း)။
Bai al inah (ရောင်းချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်း)။
Bai muajjjal (အကြွေးရောင်း)။
Bai Salam (ငွေကြိုတင်ငွေအပြည့်)။
Murabaha (စရိတ်စက နှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု)။
Musawamah (ရောင်းသူမှပေးသောစျေးနှုန်းကို ကုန်သည်မှမသိပါ)။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကကျသွားလျှင်သင်အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးကြီးထွားလာသောအခါ, သင်အမြတ်အစွန်းရလိမ့်မယ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် - စီးပွားရေးကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အခါအန္တရာယ်များအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အကျိုးရှိသောအစိတ်အပိုင်းများနှစ် ဦး စလုံးတူညီဆိုလိုတာက။ ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်ကြည့်ပါကကုန်သွယ်ရေးနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံးဝသဟဇာတဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ့်ဘဏ္Financeာရေး - အစုရှယ်ယာ ၀ ယ်ယူလို့ရပါသလား။
ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဟားမားဟုမယူမှတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာသင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဝယ်ယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ရှယ်ယာဝယ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီအားရှရီယာဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရန်သေချာရန်အရေးကြီးသည်။
များသောအားဖြင့်အစ္စလာမ့်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အဓိကကုမ္ပဏီ ၂ ခုရှိသည်။
Haram အလေ့အကျင့်လှုပ်ရှားမှုများ: လောင်းကစား၊ အရက်သို့မဟုတ်ရီဘီ (အကျိုးစီးပွား) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကစတော့အိတ်ချိန်းကိုဟယ်မာ့သ်ဟုသတ်မှတ်သည်။
ဟလာလ်အလေ့အကျင့်လှုပ်ရှားမှုများ: အဝတ်အထည်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်များတွင်လုပ်ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်ဟားမာအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှကင်းလွတ်သည်။
သုတေသီအချို့ကကုမ္ပဏီသည်ဟလာလ်မဟုတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာအနည်းငယ်ရောင်းချလျှင်သင်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုယူဆကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကုမ္ပဏီတွင်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအများစုသည်ဟလာလ်ကုန်သွယ်မှုအဖြစ်လက်ခံသည်။
ဤဥပမာတွင်ရှရီယာဥပဒေကိုလိုက်နာရန်အတွက်သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏ haram အပိုင်းမှရရှိသောမည်သည့်အမြတ်ကိုမဆိုယူပြီးထိုငွေကိုပရဟိတလုပ်ငန်းသို့လှူဒါန်းရမည်။ Fအကျိုးအမြတ် ၁၅% သည်အရက်ရောင်းမှဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ဥပမာ၊ သင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်၏ ၁၅% ကိုအတည်ပြုထားသောပရဟိတလုပ်ငန်းသို့လှူဒါန်းရမည်။
Forex Trading ဟလာလ်အကောင့်များ - ကော်မရှင်
ဟလာလ် Forex အရောင်းအဝယ်ကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားစေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာအခြားသမားရိုးကျကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များနှင့်မတူဘဲ၊ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီနောက်ပိုင်းတွင်ကဟလာလ်စေသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အကြောင်းပြချက်မှာလဲလှယ်ရေးအကျိုးစီးပွားသည်စျေးကွက်ပိတ် (နေ့ချင်းညချင်း) တံခါးကိုပိတ်ပြီးနောက်တွင်နေရာတစ်ခုကိုစွန့်ခွာသွားသောကုန်သည်တစ် ဦး မှလဲလှယ်သောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကစားရန်) ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သည်ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကျိုးစီးပွားများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၊ သင့်တော်သောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အစ္စလာမ်သာသနာ၏နောက်လိုက်များအားလုံခြုံစွာကုန်သွယ်နိုင်စေသည်။ ဒါပေမယ့် tသူ၏နေဆဲမေးခွန်းအသနားခံ; ကော်မရှင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရဟလာလ် Forex ကုန်သည်များသည်မည်သို့သို့မဟုတ်အဘယ်သို့ပေးဆောင်ကြသနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ဟလာလ် Forex ကုန်သည်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပါအခကြေးငွေများကိုပေးသည်။
halal forex ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများကပေးဆောင်အထက်ပါအခကြေးငွေများထဲမှ riba haram အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။
MetaTrader - အစ္စလာမ့်အကောင့်များ
အွန်လိုင်း CDF များနှင့် Forex ပွဲစားများကြားတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည် MetaTrader ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ မေးစရာမှာ MetaTrader သည်အစ္စလာမ့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါသလား။
MetaTrader သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဟလာလ်ဟုထင်ရသည်။ MetaTrader သည်ကုန်ပစ္စည်းများအားစျေးကွက်အတွင်းအမှာစာများဖွင့်ရန်ကူညီသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်စံကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခု၊ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပရိုအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ သင်၏အမှာစာများအတိုင်းအတိအကျပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေကိုပလက်ဖောင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပြုပြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပွဲစားသည်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင် Haram သို့မဟုတ်ဟာလာကုန်သည်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မည်သည့်သက်ရောက်မှုမျိုးရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်ဆုံးဖြတ်သည့် Forex ပွဲစားကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုသင့်ပွဲစားကတဆင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်အကောင့်များ - Forex Trading တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်
ယခုအချိန်တွင်သင်ဟာအစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်ရှိသူများဟာလာလ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးအစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးနှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းသိထားခြင်း၌လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားရမည်။
အခုကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးကိုကြည့်တော့မယ် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ သောသင်သည်သင်၏ဟလာလ် Forex ပွဲစားအကောင့်အတွက်အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အစ္စလာမ့်အကောင့် - Swing Trading
၎င်းသည်အဓိကကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားသုံးမျိုးအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာ ဉီးခေါင်းရေ နှင့် တစ်ရက်ကုန်သွယ် (နှစ်ခုလုံးလာမည့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်) ။
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအစ္စလာမ်ငွေကြေးကိုလေးစားမှုရှိချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဤသည်မည်သည့်အကျိုးစီးပွားပေးဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Swing ကုန်သွယ် ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုံးခုအတွက်အနည်းဆုံးသောအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရက်များမှရက်သတ္တပတ်များစွာအတွင်းရာထူးများဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မရှိသောကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အရေးကြီးသည်။
မရရှိလျှင်စျေးကွက်မပိတ်မီပိတ်ထားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်နေ့၏အစတွင်နေရာတစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်ကိုအမြဲတမ်းသတိထားမိတတ်သည်။ အကယ်၍ ဤကိစ္စတွင်သင့်တွင်စံသတ်မှတ်စာရင်းတစ်ခုရှိပါကအစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးမူများ (အထူးသဖြင့်အတိုးနှုန်းများခွင့်မပြုပါ) ကို ဆက်လက်၍ လေးစားလိုက်နာရန်အပိုဆောင်းဘဏ္additionalာရေးအမြတ်ကိုထုတ်ပစ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သင့်တွင်အစ္စလာမ်အကောင့်ရှိပါကဤကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းမှရရှိသောမည်သည့်အားသာချက်ကိုမဆိုသင်ခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
အစ္စလာမ်အကောင့် - နေ့ကုန်သွယ်မှု
အရောင်းအဝယ်နေ့သည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့မကုန်မီ (စျေးကွက်ပိတ်သည့်အချိန်) မတိုင်မှီပိတ်ထားမည့်ရာထူးများကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်များ၏ငွေပေးချေမှုနေ့ကုန်သွယ်မှုနှင့်အတူ swerved ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာပွင့်လင်းသောရာထူးများသည်ညအချိန်တွင်မတည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအမှန်တကယ်မည်သည့်ကုန်သွယ်အကောင့်အဘို့အတတ်၏။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ သင်ပုံမှန်စျေးကွက်နာရီများအတွင်းတစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုဖွင့်ထားခြင်းမပြုရန်သေချာနေရန်လိုအပ်သည်။ (အကယ်၍ သင်သည်ဟလာလ်မဟုတ်သောအကောင့်ကိုသုံးလျှင်) စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။
အစ္စလာမ့်အကောင့် - ဦး ရေပြား
ဦး ရေပြားသည်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့ပင်အခြားကုန်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ဦး ရေပြားတွင်ရာထူးငယ်များအမျိုးမျိုးဖွင့်ခြင်းပါဝင်ပြီးတစ်ခုစီသည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပိတ်လိမ့်မည်။ ဤရာထူးများ (တစ်နေ့တွင်းကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့) မြန်သောနှုန်းဖြင့်ပိတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်အတိုးနှုန်းကိုလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဆိုလိုသည်မှာအစ္စလာမ့်နည်းသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး၊ သင်သည်သမားရိုးကျ Forex trading account ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုတစ် ဦး တစ်ယောက်ပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ဤအချက်သည်တစ်ညလုံးဖွင့်ထားခြင်းမရှိသည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
တစ်နေ့တွင်းကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့ပင် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အနေအထားကိုကြာရှည်စွာထားလိုပါကအတိုးမပေးရရန်အစ္စလာမ့်အကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက်မှာရာထူးတစ်ခုသည်ရေရှည်အနေအထားသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်အခါအလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အတိုးမပေးမီသင်၏ရာထူးကိုလျှော့ချရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်။
ဟာလာ Forex Trading အကောင့်များ - အားသာချက်များ
ဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာလဲလှယ်ရေးလဲလှယ်ရေးကော်မရှင်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ဟလာလ်ထုံးစံ၌ Forex ကုန်သွယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာနိုင်ပါတယ်။
ဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုအသုံးပြုသောအခါအခြားထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာငွေကြေးအတွဲတစ်ခုတွင်ရာထူးတစ်ခုကိုဖွင့ ်၍ ကြီးမားသောလဲလှယ်ရေးစရိတ်များကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏စရိတ်သည်အလွန်မြင့်မားနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောငွေကြေးအတွဲများနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။
ဟာလာ Forex Trading အကောင့်များ - အားနည်းချက်များ
ဟုတ်ပါတယ်၊ လဲလှယ်မှုမလုပ်ခြင်းဟာအားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာတိုတောင်းတဲ့ရာထူးတွေနဲ့မကြာခဏဆက်စပ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့အတိုးပေးငွေများကိုအပြည့်အဝအသုံးချလို့မရပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်အကျိုးစီးပွားမရှိဘဲ non-swap ပွဲစားသည်အချို့သောအမြတ်မှအကျိုးအမြတ်ကိုရယူရန်လိုအပ်နေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော admin ရဲ့အခကြေးငွေများရရှိလိမ့်မည်။ ဒါကလည်းအစ္စလာမ့်ဘဏ်တွေဟာအမြတ်အစွန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါ။
အစ္စလာမ်အကောင့် - ကျွန်ုပ်ဘာကုန်သွယ်နိုင်သလဲ
တစ်နည်းပြောရလျှင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှတဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေစဉ်ရှရီယာဥပဒေကိုလိုက်နာရန်သင့်အားသင်၏ယုံကြည်မှုအပေါ်ဆက်လက်တည်မြဲနေစေရန်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်။
ပုံသေအတိုးနှုန်းကိုထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်ကစားသည်။ ငွေချေးစာချုပ်တည်ရှိမှုတစ်လျှောက်တွင်ထိုအတိုင်းဆက်ရှိနေလိမ့်မည်။ စျေးကွက်ရှိရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ ငွေချေးစာချုပ်သည်အတက်အကျပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လာနှုန်း (မူလငွေချေးစာချုပ်တန်ဖိုးမှတွက်ချက်သည်) သည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်ရှိနေမည်။
ငွေချေးစာချုပ်များသည် အတိုးနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံအားဖြင့် စာချုပ်များကို ဟာရမ်ဟု သတ်မှတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် - ဥပမာအားဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းပင် CFD ဆိုလိုတာက သင့်မှာ အတိုးတစ်ခုမှ ပေးဆောင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး – အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အချက်ကတော့ အရင်းခံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျံ့နှံ့ အတိုးနှုန်းတန်ဖိုးလည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
အနာဂတ်ကန်ထရိုက်များတွင်ပါ ၀ င်သောနှောင့်နှေးမှုနှုန်းအရ၎င်းတို့ကိုဟားမာဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤအချက်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုချက်ချင်းမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးအတွက်မည်သည့်အရာကမှမရှိသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သူကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာ standard forex အတွဲများကဲ့သို့တူညီစွာလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးအရ၊ သင် cryptocurrencies သည်ဟလာလ်ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် cryptocurrencies သည်အတိုးနှုန်း (သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း) ပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖွင့်နည်း ဟာလာ Forex Trading အကောင့်
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောမည်သို့ - မည်သို့ဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်အတူတူပါပြီ။
သင်ကြည့်ရှုလိုသည့် Forex trading platform ကိုသင့်အားရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားအစ္စလာမ်မစ် Forex အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ (အချို့ပွဲစားများသည်ရိုးရာအကောင့်တစ်ခုကိုယူပြီးသင့်အတွက်ဟလာလ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းတောင်းဆိုသင့်သည်။ )
သင်၏ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးသည်နှင့် သင်သည် ယခု သင်၏ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့် (Sharia Law အရ လုပ်ဆောင်နေသည်) ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းသင့်အကောင့်၏ခွင့်ပြုချက်ရရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သံသယဖြစ်ပါကဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်ယခု halal forex trading account ဖြင့်စတင်စတင်နိုင်သည်။
2022 ၏အကောင်းဆုံးဟလာလ် Forex ပွဲစားအကောင့်
Forex trading ပလက်ဖောင်းများသည်တိုး။ များပြားလှသောဟလာလ်အကောင့်များရောင်းချခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စတင်နေသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ဘာသာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော Forex ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ပြီးနောက်၊ အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါအခြားအချက်များဖြစ်သောအခကြေးငွေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ထောက်ပံ့သည့်ငွေကြေးအတွဲများစသည်တို့ကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ညွှန်ပြရန်ကူညီရန်အောက်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အာကာသကို ဦး ဆောင်သောဟလာလ် Forex ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၂။ AvaTrade - MT1 ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့် Forex အကောင့်
eToro သည်လူသစ်ကုန်သည်များနှင့်လူကြိုက်များသော်လည်း၊ ခေတ်မီဆန်းပြားမှုကိုသင်လိုချင်သူများအတွက်သင့်တော်မည်မဟုတ်ပေ။ တနည်းအားဖြင့် AvaTrade သည်သင်၏ခါးပတ်အောက်တွင်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိပါကမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုရယူလိုပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာပွဲစားသည် MT4 ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာဖတ်ခြင်းကိရိယာများ၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်စျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်စားရောင်းဝယ်ရန်အတွက် Forex EA အဖြစ်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် AvaTrade နှင့် MT4 နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပွဲစားကိုတင်းကြပ်စွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ AvaTrade ကဖော်ပြသည်မှာစံသတ်မှတ်ချက်အကောင့်နှင့်တူသော်လည်းအဓိကခြားနားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအတိုးနှုန်းများ၊ အထူးအခကြေးငွေများမရှိသဖြင့်၎င်း၏ဟလာလ်အကောင့်များသည်ရှရီယာဥပဒေ၏ဘဏ္principlesာရေးမူများနှင့်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီသည်။
AvaTrade ၌အစ္စလာမ့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်၊ သင်သည်ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်ပြီးဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတာနဲ့၊ သင့်ကိုအလုပ်ချိန် ၁-၂ ရက်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် AvaTrade သည်ငွေဖြည့်သည့်နည်းစနစ်များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အစ္စလာမ်အကောင့်ဖွင့်ရန် ၁-၂ ရက်သာကြာသည်
အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုဝေးကွာစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါက Forex trading သည်ဟလာလ်လားမဖြစ်မည်ကိုသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစိတ်ကူးထားလိမ့်မည်။ မှတ်သားဖို့လိုသည်မှာ Forex trading ပွဲစားများအားလုံးသည်အစ္စလာမ့်အကောင့်များမပေးသော်လည်း။ သို့သော်အချို့သော Forex ပွဲစားများက၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ရိုးရာ Forex trading account ကိုပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည် မူဆလင် Forex ကုန်သွယ်အကောင့်။ ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲဒါကအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
သို့သော် Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံစွာကစားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စလာမ့်အကောင့်များအပ်နှံထားသောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤလမ်းညွှန်တွင်ဆွေးနွေးထားသောကြိုတင်စစ်ဆေးထားသောပွဲစားများအရသင်ဟာအစ္စလာမ့်နိယာမများနှင့်အညီကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်နေသည်ဟု 100% သေချာစွာပြောနိုင်သည်
သင်ဘယ်လိုအစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားစာရင်းဖွင့်သလဲ?
ကိစ္စရပ်အများစု၌၊ သင်ပထမ ဦး ဆုံးအစ္စလာမ့်အကောင့်များပေးသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည် standard account တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီးအနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ account ကိုအစ္စလာမ်အကောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုသူဖောက်သည်များထံဆက်သွယ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင် ၁-၂ ရက်အတွင်းပြီးစီးသည်။
အစ္စလာမ့်အကောင့်တစ်ခုနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင်တားမြစ်ထားသောငွေကြေးအတွဲများမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျဗိုလ်ကြီးများ, အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားများဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဘယ်လိုအစ္စလာမ်မစ် Forex အကောင့်ရန်ပုံငွေ?
ပွဲစားအများစုသည်သင်၏အကောင့်ကိုဒက်ဘစ်ကဒ် (သို့) ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ရန်ပုံငွေရွေးချယ်နိုင်သည်။ အချို့က Paypal ကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ် e-wallets များကိုလည်းပေးသည်။